Mahdi Guuleed oo u jawaabay Kheyre iyo musharaxiintii go’aanka soo saaray maanta | Warkii.com
Home warkii Mahdi Guuleed oo u jawaabay Kheyre iyo musharaxiintii go’aanka soo saaray maanta
Mahdi Guuleed oo u jawaabay Kheyre iyo musharaxiintii go’aanka soo saaray maanta
Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu aad ula yaabay war-murtiyeedkii maanta ka soo baxay 12-ka musharax oo sanadkan mid walba uu doonayo inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Qoraalkii maanta ka soo baxay musharaxiintaas oo ah kuwa ugu saameynta badan mucaaradka ayaa walaac looga muujiyey hanaankii loo soo xulay guddiyadda doorashada iyo xalinta khilaafaadka, iyagoo dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo.
Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa laga dheehan karay qirashada in guddiyada cusub laga soo dhex xulay shaqaalihii xafiisyada dowladda, isagoo tilmaamay in wax farqi ah aysan u dhaxeyn guddiyadii qabtay doorashadii 2016-kii iyo kuwaan.
Mahdi sida uu qabo isku hanaan ayaa loo maray guddiyadii ay magacaawday dowladdii hore ee Xasan Sheekh iyo kuwa ay haatan magacaawday dowladdan Farmaajo.
Ugu dambeyntii ra’iisul wasaare Mahdi Guuleed ayaa qoraalkiisa ku yiri, “Miyaanu arrinku ahayn “Hal” diiddani geed ay ku xoqoto ma waydo? Mise waa hawraartii Soomaaliyeed ee marka “Geela” loo heeso uu raggu “Gorayada” u heesi jiray? Wallee ina ragow talo adduun, taada uun ma’ aha.”
Previous article12 musharax madaxweyne oo go’aan culus kasoo saaray ka qeyb-galka doorashada
Next articleKheyre oo shaaciyey inuu ka walaacsan yahay tallaabooyin ay qaaday DF
Dowladda Itoobiya ayaa markii u horeysay ka hadashay in ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya ay kala baxeen gobolka Gedo, sida ay horaantii bishan ku warrameen...
Abiy oo diiday cadaadis caalami ah kadibna qaaday tallaabo kasii dartay...
Dowladaha Faransiiska iyo Soomaaliya oo kala saxiixday heshiis ku kacaya $306m